Home Wararka Doorashadii Galmudug oo isku badashay mid ila meeraysa ah & isku-badalasho
Doorashadii Galmudug oo isku badashay mid ila meeraysa ah & isku-badalasho
Waxa ka socda Galmudug waa wax ka baxsan caqliga iyo dowladnimada. Waxaana muuqata in ay noqotay goob wixii doona laga samen karo. hadii si kale loo dhiso mar hadii aad iibsatay Senatarnimada hadana waxaad “xaq” u leedahay in aad ku badalo xildhibaanada aqalka house. Senator Yuusuf Geelle Ugaas (Dhageey) ayaa ka tagay kursigii Aqalka Sare ee dhowaan dib loogu doortay isagoo doortay in uu u tartamo golaha shacabka.
Warqad uu u diray madaxweynaha Galmudug ayuu sababta uu kursiga isaga casilay ku sheegay inuu rabo in reerka uu ku matalo Baarlamaanka uu ka dhex sameeyo siyaasad caafimaad qabta sida uu sheegay
Madaxweynaha Galmudug ayaa xalay ku dhawaaqay in doorashada shan kursi oo kamid ah golaha shacabka ay bilaabaneyso maalmaha soo socda.